ESI WEGHACHITE PASWỌỌDỤ NA LAPTỌỌPỤ - WINDOWS - 2019
Esi weghachite paswọọdụ na laptọọpụ
Ọ nwere ike ịdị mkpa maka ndị nkuzi maka ịkụgharị mgbagwoju anya, dị ka ihe mgbakwunye na ihe mmụta ahụ, na ndị nkịtị na-etinye oge ma ọ bụ mee ka onye ọ bụla bụrụ onyinye dịka nkwekọrịta zuru oke. N'ụzọ dị mma, taa, a ga-eme nke a site n'enyemaka nke ọrụ ịntanetị n'oge dị mkpirikpi.
Njirimara mepụtara mgbagwoju n'igwe
Ịmepụta mgbagwoju ederede zuru oke n'ịntanetị adịghị mfe mgbe niile. Ị nwere ike ịmepụta nhazi n'onwe gị na ọnụọgụgụ ajụjụ na ọnụ ọgụgụ dị mkpa nke akwụkwọ ozi, ma n'ọtụtụ ọnọdụ, ị ga-ede akwụkwọ ahụ iche ma ọ bụ na ederede ma ọ bụ na Okwu. Enwere ụfọdụ ọrụ ebe ọ ga-ekwe omume ịmepụta ihe mgbagwoju anya, ma maka ụfọdụ ndị ọrụ, ha nwere ike iyi mgbagwoju anya.
Usoro 1: Biouroki
Ezigbo ọrụ dị mfe nke na-enweghị usoro okwu mgbagwoju anya, dabere na okwu ị kwupụtara na ubi pụrụ iche. O di nwute, enweghi ike idebanye aha na saịtị a, ya mere a ghaghi ede ha iche.
Nzọụkwụ site nzọụkwụ ntụziaka dị ka ndị a:
Na aha "Ọmụmụ ihe" họrọ "Mepụta Crossword".
N'okpuru pụrụ iche, tinye okwu-azịza maka ajụjụ ndị n'ọdịnihu, nke ndị commas dị iche. Enwere ike ịnwe ọnụ ọgụgụ na-akparaghị ókè n'ime ha.
Pịa bọtịnụ ahụ "Mepụta".
Họrọ nhazi usoro kachasị mma na mgbagwoju anya crossword. Hụ nhọrọ ndị usoro ihe omume ahụ na-enye n'okpuru n'okpuru ozi ntinye okwu ahụ.
Nhọrọ kacha mma ị nwere ike ịchekwa dị ka tebụl ma ọ bụ foto na usoro PNG. Na nke mbụ, a na-enye ya ohere ime mgbanwe ọ bụla. Iji hụ nhọrọ maka ịchekwaa, megharia kọlọtọ nke òké ka ọ bụrụ nlele kachasị anya banyere ọnọdụ nke mkpụrụ ndụ.
Mgbe nbudata, a ga-ebipụta ma ọ bụ dezie ya na kọmpụta maka iji ya mee ihe na dijitalụ.
Nzọụkwụ 2: Ihe nkwụsịtụ
Usoro nke ịmepụta ihe mgbagwoju anya site na ọrụ a dị nnọọ iche site na usoro gara aga, ebe ị na-ahazi nhazi nke eserese onwe gị, gbakwunyere na ị mepụtara okwu nke gị-zaa onwe gị. E nwere ọbá akwụkwọ nke okwu ndị na-enye nhọrọ kwesịrị ekwesị dabere na ọnụ ọgụgụ mkpụrụ ndụ na akwụkwọ ozi dị n'ime ha, ọ bụrụ na mkpụrụ ndụ ejirila okwu / okwu ọ bụla gbakọọ. N'iji okwu nke onwe-nhọrọ nke okwu, ị ga-enwe ike ịmepụta naanị usoro nke na-abụghị eziokwu nke kwesịrị ekwesị maka ebumnuche gị, ya mere ọ kachasị mma iji okwu n'onwe gị gbachitere ya. A na-ede ha ajụjụ na nchịkọta akụkọ.
Gaa na Puzzlecup
Ihe ntụziaka ahụ bụ:
Mepụta akara nke mbụ na azịza ya. Iji mee nke a, pịa mkpụrụ ndụ ọ bụla ịchọrọ na mpempe akwụkwọ ahụ na bọtịnụ òké aka ekpe ma gaagharị ya ruo mgbe ịchọrọ ọnụ ọgụgụ nke sel dị iche iche.
Mgbe ị hapụrụ agba, agba ga-agbanwe ka odo. Na akụkụ aka nri ị nwere ike ịhọrọ okwu ziri ezi site na akwụkwọ ọkọwa okwu ma ọ bụ tinye nke gị site na iji akara dị n'okpuru ebe a "Okwu gị".
Tinyegharịa nzọụkwụ 1 na nke 2 ruo mgbe ị ga-enweta mgbagwoju anya okwu mgbagwoju anya.
Ugbu a, pịa otu n'ime akara ndị a rụchara. Ala maka ịbanye ajụjụ kwesịrị ịpụta na nri - "Nkọwa". Jụọ ajụjụ maka akara ọ bụla.
Zọpụta crossword. Enweghị mkpa iji bọtịnụ ahụ "Save Crossword", dịka a ga-echekwa ya na kuki, ọ ga-esikwa ike ịnweta ya. A na-atụ aro ịhọrọ "Print Version" ma ọ bụ "Download maka Okwu".
N'okwu mbụ, a ga-emeghe bọtịnụ mpempe akwụkwọ ọhụrụ. Ị nwere ike bipụta ozugbo site na ya - pịa aka nri n'ebe ọ bụla, ma na menu ndọpụta menu họrọ "Bipute".
Usoro 3: Crosswordus
Ọrụ dị mma nke na-enye gị ohere ịmepụta crosswords zuru ezu. N'ebe a, ị nwere ike ịchọta ntuziaka zuru ezu maka iji ọrụ ahụ rụọ ọrụ na ibe ma hụ ọrụ ndị ọrụ ndị ọzọ.
Gaa na crosswordus
Nduzi maka ịrụ ọrụ a:
Na ibe isi, họrọ "Mepụta Crossword".
Tinye okwu ụfọdụ. Ị nwere ike ime nke a site n'iji ma ọ bụrụ na ị ga-achọ ịtọye okwu ahụ. Iji dọta, ịkwesịrị ijide agba ma duga mkpụrụ ndụ.
Ịga ebe ahụ, ị ​​nwere ike ide okwu ọ bụla ma ọ bụ họrọ ya na akwụkwọ ọkọwa okwu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ide okwu ahụ n'onwe gị, wee malite ịpị ya na keyboard.
Tinyegharịa nzọụkwụ 2 na nke atọ ruo mgbe ị ga-enweta usoro ịmegharị ihe ị chọrọ.
Kọwaa ajụjụ maka nke ọ bụla site na ịpị ya. Leba anya n'akụkụ aka nri nke ihuenyo - a ga-egosi taabụ "Ajụjụ" na ala. Pịa na njikọ ọ bụla ederede. "Ajụjụ ọhụrụ".
Mgbakwunye windo ajụjụ ga-emeghe. Pịa na "Nkọwapụta nkọwa". Dee ya.
N'okpuru ị nwere ike ịhọrọ isiokwu nke ajụjụ ahụ na asụsụ nke edere ya. Ọ dịghị mkpa ime nke a, karịsịa ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịkekọrịta okwu gị na ọrụ ahụ.
Pịa bọtịnụ ahụ "Tinye".
Mgbe ị gbakwụnye, ị ga-enwe ike ịhụ ajụjụ dị na akara ahụ, ọ bụrụ na ị ṅaa ntị n'akụkụ aka nri nke ihuenyo, ngalaba "Okwu". Ọ bụ ezie na n'ebe ọrụ ahụ n'onwe gị ị gaghị ahụ ajụjụ a.
Mgbe emechara, chekwaa ihe mgbagwoju anya. Jiri bọtịnụ "Chekwa" na elu nke nchịkọta akụkọ ahụ, wee - "Bipute".
Ọ bụrụ na ị chefuru ịjụ ajụjụ maka akara ọ bụla, windo ga-emeghe ebe ị nwere ike ịdebanye aha ya.
Ọ bụrụ na ihe niile ahụ nwere ajụjụ nke ha, windo na-ebuli ebe ị chọrọ ịmepụta ntọala. Ha nwere ike ịhapụ na ndabara ma pịa "Bipute".
Ntọala ọhụrụ ga-emepe na nchọgharị. Site na ya, ị nwere ike ozugbo ịme akara site na ịpị bọtịnụ pụrụ iche na akara ntinye dị elu. Ọ bụrụ na ọ dịghị, wee pịa nri na ebe ọ bụla na akwụkwọ ahụ wee họrọ site na menu ndozi "Bipute ...".
Otu esi eme ihe mgbagwoju anya na Excel, PowerPoint, Okwu
Crossword mgbagwoju anya software
Enwere ọtụtụ ọrụ na Ịntanetị nke na-enye gị ohere ịmegharị ihe mgbagwoju anya online maka n'efu na enweghị aha. Ndị a bụ naanị ndị kasị ewu ewu na ndị a nwapụtara.
Vidiyo vidiyo, otu esi emepụta ihe mgbagwoju anya na 30 sekọnd
Esi ewepu njikọ netwọk na Windows 7
Otu esi eme ka njikwa nna na Yandex Browser
Izizi njehie na enweghị akwụkwọ akwụkwọ d3dx9_31.dll
Ịtọlite ​​ma jikọọ redio D-njikọ DIR 300 (320, 330, 450)
Esi arụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka laptọọpụ Lenovo Z580
N'ime nsogbu ndị a na-enweta na Opera nchọgharị, a maara mgbe, mgbe ị na-agbalị ile ọdịnaya ọdịnaya nke multimedia, ozi "Emezighị ka ibu nkwụnye" pụtara. Karịsịa mgbe nke a na-eme ma gosipụta data echere maka Flash Player ngwa mgbakwunye. Dị ka o kwesịrị ịdị, nke a na-akpata iwe onye ọrụ, n'ihi na ọ pụghị ịnweta ozi ọ chọrọ. GụKwuo
Olee otú iji wụnye Sony Vegas?
Na-akpata na mkpochapu mkpọtụ na mpaghara usoro